Qaybtii Labaad ee Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Qaybtii Labaad ee Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
Qaybtii Labaad ee Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!
2)LA IMAW HADAF DHAB AH
Sideen ula imadaa hadaf dhab ah?
Hadii aad rabto inuu kuu hirgalo hadafkaaga la imaaw shuruudahaadn
La imaaw wax cayiman
Inuu ahaado wax la qayaasi karo
Inuu ahaado wax lagaari karo
Inuu ahaado wax macquul ah
Inuu ahaado waqtiga mid xadidan
Dadka yaqaano waxa ey rabaan nolosha is la markaana dajiyo wadooyin ey umaraan badanaa wey ka farxad badan yihiin kuwa inaa bilaa hadaf noqoto waa waxa ugu xun ee kugu dhici kara haddii aad hadaf iyo qorsho laheen waxaa noqon doontaaa qeeb kamid ah dadka kale qorsha hooda haddii aadan qorsheesan inaad shaqo fiican hesho qof qorsheestay inuu helo shaqo fiican ayaa heli doono shaqadaaada.
Hadii aadan hadaf iyo qorsho udajin noloshaada qof kale ayaa ku adeegsan doono inuu kugu gaaro hadaf yadiisa, inaad hadaf yeelato kaliya kaa caawin meyso inaad noloshaada micno u yeessho balse wexey kaa cawineysaa inaad nolosha udajiso qorsho dhab ah kana leyxiso inaad kulumiso jihooyin qaldan.
Haddaba hadii qorshahaadu uu yahay mid dhab ah raac wadooyinkan si uu kuugu hir galo qorshahaaga.
Tallo saaro Allah
Dooro hadaf ka aad dooneysid inaad gaartid.
U dhabar adeeg dhibaato kasto oo kaaga hortimaad.
U daacad ahaw ilaa aad ka gaareysid yoolkaaga.
Ha fiirin wixii tagay ee fiiri waxaad u socotid.
Ha iloowin inaad aqriso adkaarta iyo kalimaad ka Allah.
Qeybso waqtigaada si aad uga faa’iideysato wax qabad kaaga.
Kac xiliyada ugu fiican ee labaryo Allah.
3) HAKA CABSAN GUUL DARADA
Mid kamid ah wax yaabaha ugu badan ee dadka ka hortaagan iney guul gaaraan waa kacabsashada guuldarada. Hadii aad u diyaarsantahay inaa guul gaartid waa inaad barataa sida looga hor tago guul darrada oo aad guul ugaarto.Guul darrada waa dariiqa ama habka lagu gaaro guusha, Waana inaad aqbashaa ama aad ubareerto iyada.
Dhamaan dadka ku guuleysta gaarista hab nololeedka wanaagsan waxey aamin sanyihiin iney guul darradu tahay jawaab celin, taas oo ah mid kuu tilmaameyso waxa saxda ah inaad qabato. U tixgeli iney cabsashadu tahay dareen kaliya taas oo ah mid aan kuu geysan Karin wax dhibaato ah haddii aadan adigu is gaarsiinin, Balse waxey kaa horistaagi kartaa hadaf kaagi. Waxaa layiraahdaa qof guul gaaray waa qof horay usoo guul darestay una adkeystay dhibaatada guul darada fahmayna micnaheeda sida laga soo xigtay maalqabeenka weyn ee hadda is kaleh shirkadda mikrasoofti taas oo xakunta barahadadku ay iskala hadlaan. Milkiilaha shirkaddaan waxa uu yiri “waxaan ku guuldarreystay qaar kamid ah maadooyinki imtixaanka,saaxiibkeyna waa kubaasay,Aniguna hadda waxaan ahay milkiilaha shirkaddan,saaxiibkeyna waa mid kamid ah shaqaalaha kashaqeeyo shirkaddeyda”.
Dadka guusha garay maquustaan balse dadka haray oo raja dhigtay waligood hormar magaaraan. Maxa yeelay qofka guulestay wuxuu gartay micnaha u adkeysiga guul darrada balse qof aan guleysan waa qof aan dhadhamin micnaha guul darada.
Ugu dambeen haka cabsan guul darrada waayo wexey ku iftii misaa waddada guusha.
W/Q:-Ifraax Maxamed Cali lasoco Qaybta afaraad Mar akel
Previous PostQarax saaka ka dhacay degmada Afgooye & faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay!! Next PostDAAWO 2017 Muuqaal Cusub oo ku saabsan ka hortaga Abaaraha, kana qayb qaado intii karaan´kaada !!